Mayelana NATHI | Igalari ye-ROYI ART
ROYI ART igalari nguye isitolo sokuma inthanethi abathandi art ekufuneni ubuciko ephelele yokudweba ngamanani akhokhelekayo.
Uthishanhloko wethu omkhulu we-Alizee uhola i-ROYI ART igalari yokuthengisa yaphesheya kwezilwandle, ungumthandi wezobuciko. Esikhathini esidlule 10 edlule, Alizee eye yasebenzelana eduze umklami elingaphakathi, wezakhiwo, gallerist, ubuciko ngalendoda etc ... kulapho sisebenza nabo, kulapho sizizwa singenza ngcono ngabo. Ngaphezu kwalokho, iningi labaculi bethu linamakhono ezifundweni ezithile noma amasu athile, sakha & siphinda siphinde sidwebe, sidwebe ucezu ngalunye lobuciko ngokucophelela futhi kancane. Sandisa ibhizinisi lethu ngeRepute.
Umdwebo ngamunye kuRoyi Art udwetshwe ngesandla kwibhokisi yobuchwepheshe.
Nge-Royi Art uthenga ngokuqondile kusuka ku-studio, abasunguli, abaqambi kanye nabaculi.
Siqoqe izinkulungwane zemidwebo wamafutha omhlaba omuhle kakhulu, sisuka ema-masterpieces ase-Europe kuya kubuciko be-Modern Contemporary Abstract Artworks.
Amafutha Wangempela, Amabhulashi Wangempela, Abaculi Bangempela, Ubuciko Bangempela.
Amanye amakhasimende abuza ukuthi kufana kanjani phakathi kwesiqeshana sokuqala sikhombisa ucezu oluku-inthanethi nolwenziwe kabusha.
Ngingathanda ukusho ukuthi ngeke sithembise ukuthi uzothola i-IDENTICAL eyodwa njengoba ubona kuwebhusayithi yethu ngoba yizicucu zobuciko kuphela ezingenza ngokufana ncamashi nokwasekuqaleni.
Yonke imidwebo yethu yenziwe ngopende ngesandla ukuze yonke imivimbo yebrashi ingahluka. Siyathembisa ukuthi uzokuthola ngekhwalithi efanayo nobuhle.
I-OIL PAINT / ACRYLIC Paint / Canvas
Siyaziqhenya ngokunikela ngalutho ngaphandle kwekhwalithi ephezulu yobuciko.
Yonke imidwebo eyenziwe ngabadwebi bethu ipendwe ngesandla kusetshenziswa izinto ezinhle kakhulu ezitholakalayo. Lokhu kuqinisekisa ubude obude bokugcina nokupenda kwakho.
Abadwebi bethu bakhetha ukusebenzisa iBloxx Artist Amafutha Amafutha. Izizukulwane ezinhlanu zabasebenza ngamakhemikhali emndenini wakwaBlockx bezisebenza kusukela ngonyaka we-1865 ukufeza iBolokoli Colour Colors.
Upende we-Acrylic ngupende owomisa ngokushesha oqukethe ukumiswa kwe-pigment ku-emryion ye-acrylice. Akuncibilikisi amanzi, kepha ungavimbeli amanzi lapho womile. Ngokuya ngokuthi upende luhlanganiswe kangakanani ngamanzi, noma luguqulwe ngama-acrylic gels, abezindaba, noma i-pastes, umdwebo we-acrylic ophelile ungafana ne-watercolor noma umdwebo we-oyile, noma ube nezimpawu zawo ezihlukile ezingatholakali kweminye imidiya.
UKUFAKA / ROLL E-TUBE / FRAMED
Ikhwalithi yokuhanjiswa kwakho ibaluleke kakhulu futhi izinto esizisebenzisayo ukufaka imikhiqizo yethu zibonisa ukuzibophezela kwethu.
Qiniseka, uma i-oda lakho liqukethe inhlanganisela yemikhiqizo, zizothumela ngokwahlukile kwiphakheji efanelekile, futhi ngeke ukhokhiswe ukuhanjiswa okwengeziwe.
Ukudweba ngaphandle kohlaka kuzokuhlanganiswa ngezindlela ezahlukahlukene zokulondolozwa kwama-varnish, ezimbozwe ngephepha lokuvikela nefilimu, bese zidonswa ngokucophelela ku-tube eqinile.
Umdwebo obunjiwe ugcwele ebhokisini nge-bubble pad futhi engele ezine uzovikeleka kahle uma kwenzeka kuba nengozi yokuhamba.
Iqembu elizinikezele ukuze lihlangabezane nezidingo zakho
Ukubonisana kwamahhala kwezobuciko nezilinganiso ezihlelekile.
Ukugcwaliseka okusheshayo kokujikajika, kuthunyelwe emhlabeni jikelele.
100% isiqinisekiso sokweneliseka.
Siletha indinganiso ephezulu yamakhasimende.
Sikholelwa ukuthi zonke izicelo ezivela kumthengi yithuba lokwakha ubudlelwano obalulekile.
Yamukela imibono emisha kanye nempendulo, futhi uthuthukise izinsizakalo zethu ukwedlula ukufunwa kwamakhasimende ethu.
Ezenziwe Ngesandla Amafutha Painting , Contemporary Amafutha Painting , Abstract Amafutha Painting , Oil Painting , i-Oyili Painting On Canvas , Libhala uhlaka , i- Zonke Imikhiqizo